प्रदेश नम्बर २ : हिन्दीको विरोधका बीच व्याकरण परिवर्तन गरी मधेसी भाषा बनाउने प्रयास होला सफल? :: PahiloPost
प्रदेश नम्बर २ : हिन्दीको विरोधका बीच व्याकरण परिवर्तन गरी मधेसी भाषा बनाउने प्रयास होला सफल?
जनकपुरधाम : प्रदेश नम्बर २ मा अहिले भाषा विवाद चर्किएको छ। प्रदेशको कामकाजका लागि कुन भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा दलका नेताहरुबीच विवाद बढेको हो।
प्रदेश नम्बर २ : हिन्दीको विरोधका बीच व्याकरण परिवर्तन गरी मधेसी भाषा बनाउने प्रयास होला सफल? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।